အဆိုပါ လှပသောဥယျာဉ်များ နှင့်စမ်းရေစပိုင်းတွင် Trocadero Palais ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, သူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည် 1878 တစ်လောကလုံး Exposition နှင့်အတူ. Seine မြစ်နှင့်မျက်နှာ, နောက်ခံ Palais du Chaillot, နှင့် Eiffel မျှော်စင်ရှေ့တွင်, အဆိုပါ Trocadero စမ်းရေတွင်းသည် ပဲရစ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပျော်ပွဲစားပွဲချင်းပြီး, နှင့်ဥရောပ.
Trocadero ဥယျာဉ်များနှင့်စမ်းရေတွင်းကိုမက်ထရိုဖြင့်သွားနိုင်သည်, Trocadero ဘူတာမှ.
Krizikova စမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းကိုဖြစ်စေသောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခု 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးရေပန်းများ, ကလေးတွေနှင့်လူကြီးများအတွက်ဂီတပြပွဲအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post“ ဥရောပတွင်အလှဆုံးစမ်းရေ ၁၀ ခုသင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
လှလိုက်တာ	ဥရောပခရီးသွား	စမ်းချောင်း	ရေတံခွန်	MusicalFountain	ရထားခရီးသွား